U beddel Pro: Jiilka Lead & Email Opt-In Soo-Bixinta Soo-saarista WordPress | Martech Zone
U beddel Pro: Jiilka Lead & Email Opt-In popup Plugin ee WordPress
Isniin, Oktoobar 19, 2020 Arbacada, December 23, 2020 Douglas Karr
Marka la eego xukunka WordPress sida nidaamka maaraynta maaddada, waa wax la yaab leh sida dareenka yar ee dhab ahaan loogu bixiyo masraxa aasaasiga ah ee dhabta ah isbeddelka. Ku dhowaad daabicitaan kasta - hadey tahay ganacsi ama baloog shaqsiyeed - waxay u egtahay inay u beddeleyso martida macaamiil ama rajooyin. Si kastaba ha noqotee, dhab ahaantii ma jiraan waxyaabo ka mid ah barxadda aasaasiga ah ee la qabsan kara hawshan.
Isku bedel Pro waa kumbuyuutar balaaran oo WordPress ah oo bixiya tafatiraha jiita & tifaftirka, sifooyinka jawaabta ee moobiilka, iyo plugin aan jiidi doonin xawaaraha bartaada WordPress. Qalabka wuxuu bixiyaa xorriyadda naqshadeynta oo buuxda, kicinta habdhaqanka, waxay leedahay tan isku-dhafan, iyo tan oo ah qaabab qurux badan oo lagu bilaabo.
Soo Degso Beddelaad Pro loogu talagalay WordPress
U beddel Pro - Email Ka-Bixitaanka iyo Jiilka Jiilka Lead
Isku bedel Pro waa midka ugu fudud uguna waxtarka badan soosaarida WordPress ee ay isticmaali karaan suuqleyda internetka, baloogyada, websaydhada elektaroonigga ah, horumariyeyaasha iyo dhammaan ganacsiyada kale ee yaryar iyo kuwa waaweyn ee doonaya inay kordhiyaan beddelaadda websaydhadooda. Astaamaha waxaa ka mid ah:
Ka bixida Tiknoolajiyadda Intent - Iyadoo lagu beddelayo 'Provert Pro' waxaad si fudud dib ugu celin kartaa ka tagista martida. Naqshadeynta iyo farriimaha xariifka ah ee soo jiidashada leh si aad dareenka u qabato!
Tijaabinta A / B fudud - Muuqaalka tijaabada A / B ee Convert Pro wuxuu kuu ogolaanayaa inaad abuurto noocyo kala duwan, tijaabiso, oo aad hayso waxa sida ugu fiican ugu shaqeeya dhagaystayaashaada.
Dad badan oo Tallaabooyin ah - Iyadoo lagu beddelayo 'Provert', waxaad abuuri kartaa popup-tallaabo-tallaabo badan sida soo-shaacinta da'da xaqiijinta, haa popups maya, iyo wax intaa ka badan!
Gebi ahaanba Ka Jawaaba - Beddelaan Pro gabi ahaanba waa jawaab celin. Dhammaan naqshadaha la abuuray iyadoo la adeegsanayo qalabkan waa aalad, isticmaale, iyo saaxiibtinimo Google.
Guji Guji Popups - Marka laga reebo xulashada weyn ee waxyaabaha kiciya, waxaad kaloo abuuri kartaa popup-yada soo baxa marka dadka isticmaala ay gujinayaan qoraal, sawir, badhan, iwm.
Bartilmaameedka Sare - Adeegso Beddel Pro oo abuur farriimo shaqsiyeed oo lagu soo bandhigi karo waqtiga saxda ah, kahor dhagaystayaasha saxda ah.
Isku-darka Emailka - Beddelaan Pro wuxuu si aan kala go 'lahayn ula shaqeeyaa dhammaan jawaabayaasha waaweyn ee otomaatiga ah iyo bixiyeyaasha suuqgeynta iimaylka. Iyada oo la shaqeyneysa soo dejinta & dhoofinta gaarka ah, macluumaadkaaga iimaylka ee qiimaha badan hadda waa mid waxtar badan oo agile ah. Mid ka mid ah isdhexgalka ayaa fududeynaya ka shaqeynta qaab deg deg ah si loo soo qabto loona maamulo xogta hogaanka.
Isku bedel Pro waa shey adag oo kaa caawin doona inaad dhisto liisaska emaylka, wadista taraafikada, dhiirrigeliso fiidiyowyada, dhiirrigeliso dalabyada, iyo inaad ka faa'iideysato inta badan suuqgeyntaada. Haddii aad raadineyso qalab suuqgeyn sidan ah, Beddelaan Pro waa ikhtiyaar la awoodi karo!
Beddelaan Pro Email Isku-darka Soo-Bixinta
Is dhexgalka waxaa ka mid ah ActiveCampaign, AWeber, Benchmark, Monitoring Campaign, Campayn, CleverReach, Xiriir Joogto ah, ConvertFox, ConvertKit, Customer.io, Drip, ElasticEmail, GetResponse, Hubspot, iContact, Infusionsoft, Klaviyo, Mad Mimi, MailChimp, MailerLite, Mailgun, Mailjet, MailPoet, Mailster, MailWizz, Mautic, Moosend, ONTRAPORT, SendFox, SendGrid, SendinBlue, Sendlane, SendReach, Sendy, SimplyCast, TotalSend, VerticalResponse, iyo Zapier.
Tags: imtixaanka abActiveCampaignAWeberbenchmarkKormeerka OlolahaCampaynXariifnimoXiriir joogto ahbadalo proConvertFoxConvertKitMacaamiil.iofaleeboElasticEmailGetResponsehubspotiContactInfusionsoftKlaviyoMad MimimailchimpMailerliteQoriga MailgunboostoBoostadaMailsterMailWizzMauticMoosendpopup-tallaabo badangujisid gujisidgaroonka diyaaradahagujisidbartilmaameedka popupSendFoxSendgridSendinBlueSendlaneDirRachDirSi fududCastWadartajawaab celinWordPresswordpress popup pluginzapier
Sida Loo Dejiyo Laydh 3-Qodob ah Fiidiyowyaashaada Live
Cod-bixiye: Abuur Podcast-kaaga Martidaada ah ee daruuraha ku jira